Ji achọ Ultrasonic Air Humidifier ikanam ọkụ ọkụ eletrik aromatherapy dị mkpa mmanụ mmanụ na-esi ísì ụtọ - China ji achọ Ultrasonic Air Humidifier Ikanam ọkụ Ọdụdọ Aromatherapy Mkpa mmanụ Okpukpo Diffuser Supplier, –lọ ọrụ mmepụta ihe -Ihe ngosipụta & rụpụta Co., Ltd
Mbido » Product » Aroma na-agbasa » iko Ultrasonic esi ísì diffuser
Ji achọ Ultrasonic Air Humidifier ikanam ọkụ eletrik aromatherapy dị mkpa mmanụ mmanụ na-esi ísì ụtọ
Nkebi mba .:ODMF16-072107 Igbe Nha: L15.5 * W15.5 * H20.5cm Ibu: 0.68kg mmiri: 60ml ike: 7W Ntinye aka: 100-240V ， 50HZ / 60HZ, 0.15A Nwepụta mmepụta: 24V-0.35 Gụnyere: 1pc mosaic glass shape (D14.5 * H14.1cm), 1pc nkwụnye, 1pc measurement cup, 1pc A4 size instructional sheet. Ngwugwu: 3 oyi akwa corrugated igbe na akwụkwọ ntinye. 6PCS / CTN / 47 * 32 * 24.5CM / 0.0368CBM NW.5.4kg / GW.7kg MOQ: 1000 setịpụrụ FOB SHANGHAI USD16.50 / setịpụrụ ọrụ OEM Enwere ike ịhazi Mbupu UPS / DHL / EMS / TNT / FEDEX, Site n'oké osimiri .Nke ikuku Deliv ...
FOB Ahịa: US $ 17.99 - 25.99 / Ibe
Nkeji Nkem: Piece / ibeisi 1000
Professional TOP1 esi ísì diffuser factory ebe a now.OEM na ODM Onye-nkwụsị ọrụ ngwaahia, obi ụtọ na-eziga sample ka ị na-egosi àgwà.
Nkebi mba .:ODMF16-072107
Igbe Igbe: L15.5 * W15.5 * H20.5cm
1pc mosaic glass shape (D14.5 * H14.1cm), 1pc nkwụnye, 1pc measurement cup, 1pc A4 size instructional sheet.
Ngwugwu: 3 oyi akwa corrugated igbe na akwụkwọ ntinye.
Ezi ụlọ ọrụ soplaya na-azọpụta gị oge na ego, nyere gị mmeri ahịa, Kpọtụrụ anyị
Ngwaahịa anyị nwere ike ịgafe ule ahụ dịka ịchọrọ, dịka: CE, RoHS, PSE, ETL, FCC, wdg.Ọ bụrụ na ị nwere ihe pụrụ iche ịchọrọ, biko mee ka anyị mara
Efere Shell Mkpa Car Diffuser
esi ísì mmanụ diffusers burner
High End Glass ikanam esi ísì ụtọ
Ji achọ Marble Glass Candles